अन्तर्राष्ट्रिय समाचार Archives - Page4of6- कृषि पत्रिका
एक छाक तरकारी किन्न झोला भरि नोट !
आइतबार ११ चैत, २०७४
एजेन्सी । दुनियाँको यस्तो देश हो जहाको आधा अर्थव्यवस्था केवल पर्यटनमा टिकेको छ । उक्त देश उत्तरी अफ्रीका अदनको खाडी नजिक स्थित सोमालील्याण्ड हो । सोमालील्याण्ड १९९१ मा सोमालियाबाट अलग भएर नयाँ देश बनेको थियो । अहिलेसम्म यस देशलाई कुनैपनि देशले मान्यता दिएको छैन । एक रिपोर्टअनुसार यस देशमा करीब ४० लाख जनसंख्या रहेको छ […]
चीनले अमेरिकी उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउने
बिहिबार ०८ चैत, २०७४
एजेन्सी। अमेरिकाले चिनियाँ स्टिल र आल्मुनियममा भन्सार बढाएपछि चीनले पनि अमेरिकी उत्पादनमा प्रतिबन्धात्मक नीति अंगिकार गरेर बदला लिने भएको छ । भटमासमा किसानहरूलाई दिइएको अमेरिकी सहुलियतले चीनमा बिक्री गर्दा अनुचित लाभ लिएको र यसका विरुद्ध चीनले पनि प्रतिबन्धात्मक नीति अंगिकार गर्ने चिनियाँ ट्याबलोइड ग्लोबल टाइम्सले बुधबार जनाएको छ । व्यापक रूपमा पढिँदै आएको ग्लोबल टाइम्स […]
ऋण माफी र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै हजारौं किसानद्वारा प्रदर्शन
सोमबार २८ फागुन, २०७४
एजेन्सी। भारतको मुम्बईमा किसानले बृहत प्रदर्शन गरेका छन् । किसानहरुले ऋण माफी र क्षतिपुर्ती तथा माग गर्दै अखिल भारतीय किसान सभाको नेतृत्वमा मुम्बईमा विधानसभाको बाहिर प्रदर्शन गरेका हुन । प्रदर्शनका लागि ६ दिनअघि नासिकबाट हिँडेर ३० हजार भन्दा बढी किसानहरु मुम्बई पुगेका थिए । सरकारले व्यवसायीको हितमा काम गरेर किसानलाई वेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ […]
सोमबार २१ फागुन, २०७४
कानो। नाइजेरियाको पूर्वी क्षेत्रमा केही दिनदेखि भइरहेको झडपका कारण कम्तीमा दशको मृत्यु भएको छ । किसान र गोठालाबीच भएका झडपहरुमा परी उनीहरुको मृत्यु भएको प्रहरी अधिकारीहरुले सोमबार जानकारी दिएका छन् । ताराबा राज्यको माम्बीला जिल्लामा पर्ने एक गाँउमा गत बिहीबारबाट सुरु भएको झडप हप्तान्तसम्म पनि जारी रह्यो ।नाइजेरियाका मध्य र दक्षिणी क्षेत्रमा भएका झडपहरुको अशंका […]
कसरि सुरु भयो सिरिया युद्द ? यसले देखाएको अमानवियता र खाध्यान्न संकट
सोमबार १४ फागुन, २०७४
एजेन्सी । सिरियाको समस्या आजको होइन । युद्ध सुरु हुनुपुर्व नै सिरियाली जनताहरुले बेरोजगारी, चरम भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रपति बसर अल असादको दबाबको विरोध गर्दै आइरहेका थिए । सन् २००० मा आफ्नो पिता हाफेजले कार्यभार छोडेपछि उनले सम्हालेका थिए । अरब स्प्रिङबाट प्रेरित भएर सन् २०११ को मार्चमा पश्चिम सिटी डेरामा प्रजातन्त्रको पक्षमा आन्दोलनहरु […]
१ किलो मासुलाई ५ लाख, एक लिटर दुधलाई १ लाख !
आइतबार ०६ फागुन, २०७४
एजेन्सी। दुनियाको सबैभन्दा धेरै तेलभण्डार रहेको देशमध्ये एक भेनेजुयलामा आर्थिक अवस्था यति दर्दनाक बनेको छ की मानिसहरु देश छाडेर छिमेकी कोलम्बियामा भाग्नका लागि बाध्य बनेका छन् । भेनेजुयलयामा महंगी यति चुलिएको छ की १ लिटर दुधलाई १ लाख ३० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पर्दछ । भोक टार्ने ब्रेडको मूल्य पनि चुलिएको छ । र, एउटा ब्रेडलाई […]
पतञ्जलीको गाँजा अनुसन्धानले नेपाललाई दबाब
सोमबार २९ माघ, २०७४
एजेन्सी। गाँजाको वैधानिक प्रयोग खोल्ने लहर अब अमेरिकी तथा युरोपेली मुलुकमा मात्र सीमित रहेन। भारतमा पनि कानुनी प्रतिबन्ध फुक्का गर्न आवाज उठेको छ। आवाज उठाउनेमा सबभन्दा अगाडि छन्, योगगुरू रामदेव। रामदेवद्वारा सञ्चालित पतञ्जली आयुर्वेदले गाँजाका औषधिलाई कानुनी मान्यता दिन ‘लबिङ’ सुरु गरेको छ। कम्पनीका कार्यकारी बालकृष्णले हरिद्वार अनुसन्धान केन्द्रमा दुई सय जना वैज्ञानिकबाट गाँजा लगायत […]
भारतको किसानमुखि बजेटले नेपाली किसान मारमा ,भारतमा उत्पादित सामानको भाउ नेपालमा बढ्ने निश्चित
शुक्रबार १९ माघ, २०७४
नयाँ दिल्ली। भारत सरकारका अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले विहिबार आर्थिक वर्ष २०१८–१९ को आम बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मोदी सरकारको अन्तिम पूर्णकालिन बजेट कृषि तथा ग्रामिण अर्थतन्त्र तथा स्वास्थ्य सेवा लक्षित रहेको छ । गरीब तथा निमुखा जनताको गाँस बाँस र कपासको आवश्यक्तालाइ प्राथमिकतामा राखेर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सुविधाका योजनाहरु बजेटले घोषणा गरेको […]
जहाँ बन्दुकको बलमा गोलभेडा जोगाइन्छ !
सोमबार १५ माघ, २०७४
एजेन्सी। कहिले काँही संसारको कुना काप्चामा पत्याउनै नसकिने घटनाहरु हुने गर्छ । यस्तै नयाँ घटना बाहिर आएको छ । भारतको इंदौंरमा तरकारी व्यवसायीहरुले गोलभेडालाई चोरबाट जोगाउन बन्दुकसहितको सुरक्षा गार्ड परिचालन गरेका छन् । भारतको मुम्वईमा चोरहरुको एक समूहले एउटा तरकारी पसलबाट ३ सय किलो गोलभेडा चोरी गरेपछि इंदौंरका व्यवसायीहरुले चोरबाट गोलभेडाको सुरक्षा गर्न बन्दुकसहितको गार्डलाई खटाएका […]